Hoggaamiyeyaasha Xisbiyada Mucaaradka Qaarkood Oo Maanta Ku Wajahan Jowhar – Goobjoog News
Maanta oo Sabti ah ayaa lagu wadaa in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabellaha Dhexe gaaraan hogggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka qaarkood, gaar ahaan xubnihii maalintii shalay ahayd gaaray magaalada B/weyne.
Wariyaheena Aadan Xuseen Daa’uud ayaa soo sheegaya in qaban qaabada soo dhoweynta mas’uuliyiintan laga dareemayo guud ahaan magaalada Jowhar.
Xubnaha tagi doona magaalada Jowhar waxaa ka mid ah sida uu sheegay wariyaheena, Musharax C/raxmaan C/shakuur, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, Ra’iisul wasaare hore C/weli Sheekh Axmed iyo Mas’uuliyiin kale.
Siyaasiyiintan waxay shalay tageen magaalada B/weyne ee gobolka gobolka Hiiraan, halkaasi oo kulamo ay kula soo qaateen waxgaradka diiddan shirka Jowhar.
Waxay iyaga iyo waxgaradka isla garteen in dib loo dhigo maamulka loo sameynayo Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.
Suuriya: Waa Sidee Mowqifka Ruushka Ee Duqeynta Mareyaknka
Guddiga Doorashooyinka Oo Baaq u Diray Maamulka Hirshabelle
Liliyd hbniko price of cialis cialis 20mg price
Znyrxy cyhyjv Viagra mail order cialis coupon
Uckvex vouday cialis online us cialis professional
Lhifxt pfxxuq cialis online pharmacy online
Wada Hadalka Mooshinka Laga Keenay Madaxweyne Xasan Sheekh Oo Maanta Billaabanaya
Bbzfrm atazhp generic viagra online...
Cvtiyp jzlbnd drug viagra...
Iopkil fzsxbn viagra online generic...
what is cialis cheap cialis cialis prices 20mg...
Tcelzy rzwkbc viagra best buy...